Fariin Culus oo kusocota Iskaabulada Guurka Oo Yareeya Cuduro Badan | shumis.net
Home » galmada » Fariin Culus oo kusocota Iskaabulada Guurka Oo Yareeya Cuduro Badan
Fariin Culus oo kusocota Iskaabulada Guurka Oo Yareeya Cuduro Badan
Gaadaha habeenkii..kaligaa galgalashiyo..gadgadoonka dhaliso…adika iyo go,aaga hadba dhinac u guuroo…barkinta gabood iyo gaashan ka dhigata.. hadan guud halaaleey hadba gacan la saarayn… ileeyn gogashu wahel ma leh.
Tixdaasi khiimaha badan waxaa ka tirayay nolosha kalimida, ama iskaabalada Abwaan Maxamed Warasme Hadraawi, ma ahan awaanka oo kaliya nolosha kali nimada ruuxa ka hadlay balse waxaa jira in aay axaabadi hore dadka ku gubaabin jireen guurka.
Waxaa La Yiri RAG GOGOL XUN IYO WARAABE GOD XUN GUGOODA MA GAARAN, taas oo aay Odayadi horay ugu maah maahi jireen raga ku raaga iskaabulo nimada.
La Soco Qeeybaha kale iyo codsiyo naga soo gaaray akhristayaasha oo ku saabsan in aan xooga saarno qoroomiyanka wax tarka u leh bulshada.
Title: Fariin Culus oo kusocota Iskaabulada Guurka Oo Yareeya Cuduro Badan